Mogadishu Journal » 2019 » August » 29
Mjournal :-Golaha Wasiirraada Xukuumadda Federaalka ayaa taageeray go’aankii Wasaaradda arrimaha Gudaha ee 22kii bishan Agoosto ay ku caddeysay inaysan oqoonsaneyn natiijooyinkii kasoo baxay doorashooyinkii ka dhacay Kismaayo. Golaha ayaa sidoo kale Wasaaradda Arrimaha Gudaha...
Kenya oo u jawaabtay dowladda Soomaaliya
Mjournal :-Xukuumadda Kenya ayaa ka jawaabtay eedeymo la xiriiray inay ciidamada Kenya ee ku sugan gobolka Jubbada dhexe ay wax ka xog-yihiin dhuxusha halkaa laga dhoofiyo. Danjiraha dowladda Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay, Abuukar Daahir Cusmaan (Abuukar Baalle) ayaa...
NISA oo sheegtay inay qabatay xubin sare oo ka tirsan Warbaahinta Al-Shabaab
Mjournal :-Hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ayaa baahisay Sawirada Sarkaal ay sheegtay Hay’addu in uu ka tirsanaa Warbaahinta Al-Shabaab. Sida lagu daabacay Barta twitter-ka Hay’adda NISA Sarkaal kaas ayaa la sheegay in lagu soo qabtay Howlgal ka dhacay...
Mjournal :-All planes flying to Kismayo Airport will first have to land in Aden Abdille International Airport in Modadishu, federal government of Somalia has announced. The directive comes amid deteriorating relationship between Kenya and Somalia, with Nairobi accused of meddling...
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane; Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbad ka jeediyey shirka nabadda iyo xasilloonida geeska Afrika ee qeybta ka ah fadhiyada Madasha Iskaashiga Waddamada Afrika iyo Japan (TICAD). Wuxuuna Madaxweynuhu soo...
Mjournal :-Boqoradda Britain, Queen Elizabeth ayaa aqbashay qorshaha Ra’iisul Wasaaraha Britain, Boris Johnson uu ku codsay in howl-gab laga dhigo baarlamaanka. War qoraal ah oo kasoo baxay la-taliyayaasha rasmiga ah ee Boqoradda Britain eeloo yaqaano ‘The Privy...
Mjournal :-Hey’adda Duulista iyo Saadaasha Hawada ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa soo saartay amar ku socda Diyaaradaha taga ama ka yimaada Garoonka Diyaaradaha Magalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose. Diyaaradahas ayaa lagu amray in markii ay tagayaan...
Uganda Airlines oo duulimaadkii u horreeyay ku soo gaartay Muqdisho
Mjournal :-Diyaaraddii u horreeysay ee shirkadda duulimaadyada Uganda Airlines ayaa goor dhow soo caga-dhigatay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cadde. Duulimaadkan ayaa billow u ah duulimaadyo toos ah oo isku xiraya Muqdisho iyo Kampala. Xaflad lagu daahfuray...
Real Madrid & Barcelona xifaaltanka suuqa kala iibsiga Ciyaartoyda
Iyada oo Shan maalmood uu ka haray suuqa kala iibsiga, taageerayaasha Real Madrid ayaa wali weydiisanaya saxiixyo cusub kooxdooda, Zinedine Zidane ayaa weli ku riyoonaya mucjiso. Si kastaba ha noqotee, xaqiiqda ayaa ah in Los Blancos aysan ka fiirsaneynin inay ku darto kooxdeeda...
Ra’iisul Wasaaraha oo sagootiyay Ciidamo ka tirsan Milateriga oo u baxay furimaha dagaalka
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa xerada tababarka ciidamada ee Gen. Goordan booqasho sagootin iyo dardaaran ah ugu tagay ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo loo diyaariyay howl gallo gaar ah oo ka sameyn doonaan deegaanada Al-Shabaab maamulaa...
Dowladda Soomaaliya oo soo dhaweysay go’aankii QM ay ku diiday dalabkii Kenya
Mjournal :-Danjiraha Qaramada Midoobey u fadhiya Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Abuukar Daahir Cusmaan ayaa Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ku bogaadiyay diidmada Golaha Ammaanka ee qaraarka tirsigiisu yahay 1267. Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maanta diidmo...